Abasebenzi base-UKZN basize Abadala Ngosuku LukaMandelaAgriculture, Engineering & Science
Abasebenzi baseSikoleni Sezokwelapha bathole isitifiketi sokubabonga abasinikwe yikhaya i-Aryan Benevolent Home (ABH) Clayton Gardens for the Aged emva kokubamba iqhaza emkhankasweni wokulungiswa kwekhaya labadala e-Asherville eThekwini ngosuku lukaMandela.
Abasebenzi bachithe usuku lwabo lukaMandela bependa amakotishi angama-46 ahlala abadala abaphila ngempesheni.
Abasebenzi base-UKZN bebemenywe uDkt Serela Ramklass, onguSihlalo webhodi yalelikhaya nomsebenzi esikoleni i-SCM ukuba babambe iqhaza kulo msebenzi.
Bapende amakotishi amabili besebenzisana namanya amavolontiya ase-UKZN, izikhungo zezempilo, uMasipala weTheku, abasemkhakheni wezokungcebeleka, nabasemabhange.
Ugogo obebonakala ejabule uMrs Sonia (80) uthe uwuthokozele kakhulu lo msebenzi kanye nokuvakasha. ‘Ngijabule kakhulu ukuthi senisenzele umsebenzi omkhulu kangaka,’ usho kanje. Uthembise ukuthi uzotshela amadodana akhe amabili ngokufika kwe-UKZN.
‘Umzamo nomfutho okhonjiswe yiqembu lamavolontiya ase-SCM kulethe ukumamatheka kwabahlala kuleli khaya njengoba bebebukele indawo abahlala kuyo ithole impilo entsha nokuqhakaza,’ kusho uRamklass.
U-Ramklass ubonge bonke abebevolontiyile kulo msebenzi waphinde wazwakalisa ukuncoma iqhaza abalibambile ekuthuthukisweni kwaleli khaya. Unikezele ngesitifiketi sokubonga i-Thank You for Responding to our Request for Assistance’ kwabebevolontiyile ebonga endaweni yoMkhandle wase-ABH.
Umphathi we-SCM uNkk Antoinette Botha, uthe uyaziqhenya ngabasebenzi ngokukhumbula uMadiba ngokuvolontiya.
Uma umsebenzi wosuku usuphothuliwe, umholi weqembu uNkk Sagree Pillay waklomelisa uNkz Salome Pillay ngenxa yekhono lakhe lokupenda, noNkz Nomfundo Msomi ngokusebenza ngokuzinikela kanye noNkz Phakama Jika ngokusebenza ngokuzimisela nangokuthula. Umklomelo wokunandisa wona unikezelwe kuNkz Thuli Shezi